အဖိနှိပ်ခံတို့ အသံ: July 2013
အင်္ဂလိပ်စာ စိတ်ပါဝင်စားသူများ အတွက် သင်ကြားရေး ထောက်ကူပြု ဆိုင်ရာ website.
Posted by Wai Lin Aung at 5:05 AM
ကြွေလွင့်ခဲ့ရသော ကြယ်များ ၈၈၈၈ အမှတ်တရ
ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း: ကြယ်တွေ ကြွေနေတဲ့ တိုင်းပြ ကြယ်တွေ ကြွေနေတဲ့ တိုင်းပြည် ရေးသူ - ခင်ငြိမ်းသစ် ကြယ်ဆိုတာ ကိုယ်ပိုင် အလင်းရောင်ရှိတယ်။ သူတို့ရဲ့ နေရာဟာ မြင့်မားတဲ့ ကောင်းကင်ကြီ...
Posted by Wai Lin Aung at 3:54 AM
ပြောင်းလဲတတ်သော သဘောနှင့် မပြောင်းလဲသော ပရမတ္တသစ္စာ
Posted by Wai Lin Aung at 7:04 AM
သြဇာရှိတဲ့ NGOတွေ Institutions တွေအားကောင်းမောင်းသန် ဖြစ်လာအောင်ကြိုးစားရပါမယ်။ အဲဒီ အင်စတီကျူရှင်းတွေအားကောင်းလာရင် Third Party တွေဖြစ်လာမှာပါပဲ။ လူထု ကို လွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့ လူထုရဲ့အကျိုးကိုဆောင်တဲ့ Institutions တွေရဲ့အားကို မဲအနိုင်ရဖို့လိုတဲ့ ပါတီတွေကအားကိုးရမှာပါ။
Posted by Wai Lin Aung at 12:45 AM
" ထန်းပင်ရိပ် "
၀ါးခေါက်ကြ မောင် ။
Posted by Wai Lin Aung at 1:56 AM
ှStop the different ways of misdeed!
ရပ်ကြလော့ ၊ ခိုးစားခြင်းမှရပ်ကြလော့ ၊ လုစားခြင်းမှ ရပ်ကြလော့၊ လိမ်ညာခြင်းမှ ရပ်ကြလော့၊ အဂတိလိုက်စားခြင်းမှ ရပ်ကြလော့ ၊ အာဏာအလွဲသုံးစားပြုခြင်းမှ ရပ်ကြလော့၊ သူတစ်ပါးပိုင်လယ်မြေကို အတင်းဝင်လုခြင်းမှ ရပ်ကြလော့၊ သယံဇာတများ မတရားယူငင် သုံးစွဲခြင်းမှ ရပ်ကြလော့၊
Posted by Wai Lin Aung at 11:21 PM
(ထားရာမှာနေ------ စေရာသွား---- နွားနဲ့မခြားပေ------နွံနစ်တဲ့ ကျွန်အဖြစ် မှလေ------လွတ်မြောက်ရာလမ်းစ ----မှန်းဆ သူရှာဖွေ) ။
အော် (ထားရာမှာနေ------ စေရာသွား---- နွားနဲ့မခြားပေ------နွံနစ်တဲ့ ကျွန်အဖြစ် မှလေ------လွတ်မြောက်ရာလမ်းစ ----မှန်းဆ သူရှာဖွေ)၂ ။
ကို အောင်ဆန်း--- ဦးအောင်ဆန်း-- အောင်ဆန်းတဲ့ဟေ ။) -----( ပွင့်လန်းလာခဲ့ နာမည်ပေ )--
---မဟုတ်ရင်မခံ -----မှန်ရာကိုလုပ်တယ်လို့ ------ဂုဏ်ပုဒ် ၀ိသေသထူးတွေ-----
Posted by Wai Lin Aung at 8:47 AM
Posted by Wai Lin Aung at 2:06 AM
(နှစ်လ နာရီ -------ခါရာသီရွေ့ပေမဲ့ -----အာဇာနည်နေ့ ကိုဖြင့် မမေ့ သင့်ပါသလေ။ ယနေ့ဖြင့် သတိတရားထားဖို့အခြေ------ အများပြည်သူတွေ -------အများ ပြည်သူတွေ -------အာဇာနည်နေ့ကို လေ------ တွေးရူကာပဲ --------အလေးပြုပါမယ်လေ။)၂
------စနစ်အခြေ ပြောင်းပေခဲ့ပေမဲ့ အဖြစ်ဟောင်း များကတော့ ဖြေသော်မပြေ ----လွမ်းမျက်ရည်----- မြေခပြီမို့ ဆွေးတသတ---- တွေဆ မရွှင်ပေ------ ရွှေရင် ဆို့ကဲ ကြေ ကွဲဝမ်းနည်းရပုံတွေ ယနေထက်တိုင်အခြေ မမေ့တဲ့နိုင်ပါပေ (အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်တွေ ကောင်းရာသုဂတိ ရောက်ရှိကြပါစေ-)၂--
--တေးကဗျာအနုစာခွေ --ရေးကာအလေးပြု -----အလေးပြု ပါတယ်လေ)၂
Posted by Wai Lin Aung at 12:57 AM
သတ္တိသွေးတွေ မွေးထုတ်ခဲ့ပေ------ ဒို့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလေ )၂ ------ (ရာဇ၀င်သမိုင်းတစ်ခေတ် ဆန်းသစ်လာပေ ) ၂ ------ --- ဒို့ပြေ ဒိုမြေ --------တို့ရဲ့ အခြေတွေ -----တည်ဆောက်ခဲ့ရပေ------ နားမျက်စိတွေ------- ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပေ ---လွတ်-လပ်-တဲ့ ထွဋ်မြတ် စံဌာနေ-----
ကမ္ဘာ ------------တစ်ဝှန်း----------------မလေ ----
---မြန်မာတွေ ---တစ်စခန်း လျှမ်းနိုင်ခဲ့ပေ-------- ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း -----မဆုတ်တမ်း -------သူလမ်းညွှန်တာတွေ-----
ကမ္ဘာတည်သရွှေ့ ----------အာဇာနည်နေ့ကိုဖြင့် ------------မမေ့သင့်ပါသလေ-----ယနေ့ဖြင့်--မြန်မာတွေ ---အော် - -- မမေ့သင့်ပါသလေ---- မြန်မာသားကောင်း--ဇာနည်ဆွေ --ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလို့ ထွန်းပေါက်ကြပါစေ------- အောင်သပြေ----ညောင်ရေ သွန်းလောင်းပဏ္ဍာခြွေ။ )
Posted by Wai Lin Aung at 12:38 AM
မျိုးဆက်များစွာအထိအခဲမကျေသေးတဲ့ ယုန်တွေက လိပ်တွေကို ထပ်ပြီး စိန်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။
လိပ်တွေကလည်း မကောင်းတတ်လို့လက်ခံရတဲ့အထာနဲ့ပေါ့လေ ။
`အင်းအင်း မင်းတို့အဲလောက်ဆန္ဒရှိနေလည်း ပြိုင်ပေါ့´
ဒါနဲ့ယုန်တွေက သေချာလူရွေးပါတယ်။ ဟိုးတုန်းက အအိပ်မက်လို့ ရှုံးခဲ့ပြီးမဟုတ်လား။
ဒီတစ်ခါတော့ ကျန်းမာသန်စွမ်းပြီး တက်ကြွသွက်လက်တဲ့ ယုန်ပျိုလေးကိုရွေးပြီး သေချာပြင်ဆင်ကြတယ်။
ဒါနဲ့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ အချိန်လည်းစေ့ရော---ပြိုင်ပွဲစပါပြီ။
Posted by Wai Lin Aung at 9:28 AM
အောက်ပါ မိန့်ခွန်းမှာ ဂျပန်ခေတ် ၁၉၄၄ -ခု မတ်လ ၁၃ ရက်နေ့ နံနက်အချိန်တွင် မင်္ဂလာဒုံ ဗိုလ်သင် တန်းကျောင်း ဆင်း ပွဲ၌ ဗမာ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် စစ်သေနာပတိနှင့် စစ်ဝန်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ပြော ကြားသော မိန့်ခွန်းတရပ် ဖြစ်ကြောင်း။ သူကျဆုံးသွားခဲ့ရသော ဤဇူလိုင်လတွင် သူ့အား ပြန်ပြောင်း သ တိ ရမိ သည့်အားလျှော်စွာ သူ၏ ပြောင် မြောက်သော မိန့်ခွန်းကို ရှာဖွေဖော်ပြလိုက်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း။
Posted by Wai Lin Aung at 8:52 AM
Posted by Wai Lin Aung at 1:39 AM
အင်္ဂလိပ်စာ စိတ်ပါဝင်စားသူများ အတွက် သင်ကြားရေး ထောက...